Ciidamada Xarakada Shabaabul Mujaahidiin waxey habeenkii xalay dagaal culus ku qaadeen difaacyada ciidamada Kufaarta Afrikaanta iyo kuwa dowlada Ridada federaalka ay ka sameysteen deegaanka Shalambood ee gobalka Shabeelada hoose.
Dagaalka waxaa la isku adeegsaday hubka noocyadiisa kala duwanâ€™iyadoona dhawaaqa rasaasta dagaalka si aad ah looga maqlayay deegaano iyo degmooyin ka tirsan gobalka Shabeelada hoose.
Idaacada Islaamiga ah ee Andalus ayaa baahisay in dagaalka uu socday muddo saddex saac ku dhawâ€™waxeyna warar hoose sheegayaan iney jirta khasaara nafeet iyo mid hantiyadeed oo shisheeyaha iyo maleeshiyaatka dowlada federaalka lagu gaarsiiyay dagaalkaasi.
Dagaalkan ayaa imaanaya xilli dhawaan qaraxyo iyo weeraro kamiino ah oo ka dhacay qeybo ka mid ah gobalka Shabeelada Hoose lagu dilay tiro askar ah oo ka tirsan ciidamada shisheeyaha gaar ahaan kuwa Uganda.
Previous: Weerar Lagu Qaaday Xarunta Madaxtooyada Maamulka Hiir-shabeelle.
Next: Ciidamada Burundi Oo Dilay Qof Shacab Ah Oo Ay Ka Qafaasheen Deegaan Sh/dhexe Ka Tirsan.